Momba anay, izao tontolo izao maneran-tany Switzerland Switzerland (WKG)
Ny Fiangonan'Andriamanitra eran-tany amin'ny WKG fohy, anglisy "Fiangonan'izao tontolo izao" (fantatra hatramin'ny 3 aprily 2009 tany amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao mitondra ny anarana hoe "Fahasoavana Komunika Iraisam-pirenena"), dia tamin'ny 1934 tany Etazonia ho "Radio Fiangonan'Andriamanitra" nataon'i Herbert Niorina i W. Armstrong (1892-1986). Amin'ny maha-manam-pahaizana manokana momba ny dokambarotra azy ary mpitory ny Fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro fahafito, Armstrong dia mpisava lalana tamin'ny fitoriana ny filazantsara tamin'ny alàlan'ny radio ary tamin'ny 1968, tamin'ny onjam-peo "The World Tomorrow". Ny Gazety "Plain Truth", naorin'i Armstrong tamin'ny 1934 ihany koa dia navoaka tamin'ny teny alemana nanomboka tamin'ny 1961. Voalohany toy ny "Ny Fahamarinana Fahamarinana" ary nanomboka tamin'ny 1973 dia "Mazava sy marina". Tamin'ny taona 1968 ny vondron'olona voalohany tany Soisa izay miteny alemà dia niorina tany Zurich, fotoana fohy taorian'izay tany Basel. Tamin'ny volana Janoary 1986 dia notendren'i Armstrong i Joseph W. Tkach ho praiminisitra jeneraly. Taorian'ny nahafatesan'i Armstrong (1986) dia nahita fiovana miadana i Tkach Senior ...
Manasongadina an'i Jesosy Kristy Ny soatoavintsika dia fitsipika fototra iorenantsika ny fiainantsika ara-panahy ary iatrehana ny laharam-pahamehana azontsika ao amin'ny Fiangonana Eran-tany maneran-tany amin'ny maha zanak'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Manantitrantitra ny fampianarana ara-Baiboly mahasalama Isika dia manolo-tena amin'ny fampianarana ara-Baiboly salama. Mino izahay fa ny foto-pinoana manan-danja amin'ny kristianista ara-tantara dia ny finoana kristiana ...
Ny World World Church of God (WKG) (anglisy: Grace Communion International nanomboka ny 3 aprily 2009) dia nanova ny toerany tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa ho amin'ny finoana sy fanao efa hatry ny ela. Ireo fiovana ireo dia nifototra tamin'ny fiheverana fa ny famonjena dia avy amin'ny fahasoavana amin'ny alalan'ny finoana. Na dia efa nitory izany tamin'ny lasa aza isika dia nifandray hatrany tamin'ny hafatra nomen'Andriamanitra antsika amin'ny asantsika izay ...
Tao anatin'ny dimy ambin'ny folo taona lasa izay, ny Fanahy Masina dia nitahy ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany tamin'ny fitomboan'ny fahatakarana ny fotopampianarana sy ny fahatsapana an'izao tontolo izao manodidina antsika, indrindra ireo Kristiana hafa. Saingy ny halehiben'ny haingam-pandeha nanomboka ny nahafatesan'ny Herbert W. Armstrong, izay nanorina ny mpanohana sy ny mpanohitra. Mandoa ny miato ary hijery hoe inona isika ...
Joseph Tkach dia pasitera jeneraly ary filohan'ny birao mitodika amin'ny "Fiangonana Eran-tany maneran-tany", fohy WKG, anglisy "Church World World Church". Nanomboka ny 3 aprily 2009 dia novana anarana hoe "Fahasoavana Iraisam-pirenena" ny fiangonana. Dr. Tkach dia nanompo ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany ho minisitra voatokana hatramin'ny 1976. Nanompo ireo vondrom-piarahamonina tany Detroit, Michigan izy; Phoenix, Arizona; Pasadena sy Santa Barbara-San Luis Obispo. Ny rainy Joseph W. Tkach sen., Dia notendren'i Dr. Tkach mankany ...
Maty tamin'ny Janoary 1986 i Herbert W. Armstrong tamin'ny faha-93 taonany. Ny nanorina ny Fiangonana Eran-tany manerantany dia lehilahy niavaka, izay misy fomba fitenenana sy fomba fanoratra mahavariana. Niaiky ny olona mihoatra ny 100.000 ny fandikana ny Baiboly izy ary nanangana ny Fiangonan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao ho radio, fahitalavitra ary famoahana boky izay nahatratra ny tampon-taonany mihoatra ny olona 15 tapitrisa isan-taona. Ny fanamafisana mafy amin'ny fampianaran'i Mr.
Ankehitriny dia matetika no tsy maintsy manao anarana ho anao ianao mba ho zava-dehibe sy zava-dehibe ho an'ny hafa sy ny tenanao. Toa ny olona dia mitady fitadiavana tokana tsy misy dikany. Fa i Jesosy dia efa nilaza hoe: “Izay mahita ny ainy no hahavery azy; ary na iza na iza no mamoy ny ainy noho ny amiko dia hahazo azy ”(Mt 10:39). Amin'ny maha-fiangonana antsika, dia nianatra avy amin'ity fahamarinana ity isika. Nanomboka tamin'ny taona 2009 dia niantso ny tenantsika hoe Fahasoavana Fahasoavana isika ...